Mon, Jul 13, 2020 at 7:55am
सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र रामेछापमा भुकम्पको धक्का
काठमाडौँ, ५ भदौ । सोलुखुम्बुको गोलीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ४ म्याग्नीच्यूटको भुकम्प गएको छ । बिहीबार बिहान ७ बजेर ७ मिनेटको अवस्थामा लिखुपिके गाउँपालिकाको गोलीलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ४ म्याग्नीच्यूटको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्पमापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ । भूकम्पका कारण सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र रामेछापका केही स्थानमा सामान्य धक्का महसुस भएको छ । विहिबारको भुकम्प २०७२ सालको पराकम्प नभएको भुकम्पमापन केन्द्रले जनाएको छ..
अछाम, ५ भदौ । अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका–५ लिडीको सुकिबागमा गएराति जिप दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना घाइते भएका छन् । बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका–५ लिडीको सुकिबाग भन्ने स्थानमा बुधबार राति करीब साढे ८ बजे भएको दुर्घटनामा अन्य तीन घाइते भएका छन् । रामारोशन गाउँपालिकाको मुजाबगरबाट जयगढ आउँदै गरेको से१ज ९९५ नंको जिप जयगढ–माझेठाना सडकखण्डअन्तर्गत सुकिबागमा बुधबार राति करीब..
प्रधानमन्त्री सिंगापुर जाँदै, अब भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद बैठक
काठमाडौँ, ५ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य उपचारमा लामो समय लाग्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक कार्यसञ्चालन विधि संशोधन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठक सञ्चालन विधि संशोधन गरेको हो। ओली स्वास्थ्य उपचारका लागि बिहीबार सिंगापुर जाँदैछन्। मन्त्रिपरिषद्ले बैठक सञ्चालन विधि संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री जहाँ भए पनि भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बैठक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा..
नेकपाका वरिष्ठ नेता खनाल किन गए चीन ?
काठमाडौँ, ५ भदौ । प्रमुख सत्ताधारी नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल चीन भ्रमणमा जानुभएको छ । खनाल पाँच दिने भ्रमणका लागि बुधबार राति चीन जानुभएको स्रोतले जनाएको छ । चिनियाँ कम्युनिष्टको निमन्त्रणामा गोन्जाओमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्नेगरी उहाँ चीन जानुभएको हो । अगष्ट २१ देखि २४ सम्म चीनमा एक्काइसौँ शताब्दीको म्यारी टाइम सिल्क रोडको अन्तर्राष्ट्रिय..
स्कुलको पाँच बिघा जग्गा गैरसुकुम्बासीलाई
काठमाडौँ, ५ भदौ । विद्यालयको ५ बिघा १ कठ्ठा जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको छ। रौतहटको गुजरा नगरपालिका–१ स्थित श्री माध्यमिक विद्यालयको कित्ता नम्बर १३७ को एउटै प्लटको जग्गा २०६७ सालमा तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले व्यक्तिलाई बाँडेको हो। सुकुम्बासीका नाममा पुख्र्यौली सम्पत्ति भएका व्यक्तिलाई नै विद्यालयको बाँडेको पाइएको छ। जग्गा सुमित्रादेवी सापकोटा, नवराज खुलाल र पनिलाल चौधरीका नाममा पास गरिएको छ।..
३४ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकविहीन, पदपूर्तिमा समस्या
काठमाडौँ, ५ भदौ । ३४ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेका छन्। कर्मचारी छिटोछिटो सरुवा भएर सुगममा जान थालेपछि स्थानीय तह रिक्त बनेका छन्। गाउँपालिका र नगरपालिकाको सचिव सरहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सेवा प्रवाह कमजोर बनेको छ। विकास निर्माणसमेत सुस्त छ। नगरपालिकामा उपसचिव तहका प्रमुख प्रशासक हुने व्यवस्था छ। तहमा ६८ हजार कर्मचारी दरबन्दी भए पनि २९ हजार मात्रै कार्यरत..
Results 9837: You are at page 108 of 328